Sawirro: Mursal Oo guddoomiyay kulanka guddiga joogtada ee G/Shacabka | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Sawirro: Mursal Oo guddoomiyay kulanka guddiga joogtada ee G/Shacabka
Sawirro: Mursal Oo guddoomiyay kulanka guddiga joogtada ee G/Shacabka
Guddiga joogtada golaha shacabka ee barlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulankooda sidaxaad ee kalfadhiga 8-aad ku yeeshay xaruunta guddiyada iyo guddonka golaha shacabka barlamaanka Soomaaliya.
Kulanka waa guddoomiyanayay guddoomiyaha golaha shacabka ee barlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan Iyada uu goob job ka ahaan ku xigeenka kowaad ee golaha Mudane Cabdiwali Sheekh Ibraahim Muudeey.
Xubnaha guddiga ayaa kulankooda maanta waxa ay uga hadleen shuruucda taala golaha shacabka iyo sidii loo kala horumarin laha ama mudnaanta loo kala siin laha maalmaha la kala gelinayo shuruucda golaha hor yaala.
sidokale kulanka ayaa looga hadlay sidii shaqada baarlamanka loo kordhin laha isla markaana inta waqtiga baarlamanka ka harsan loo dardar gelin laha tayada waxbarashada dalka .
Maqaal horeCiidamada AMISOM oo dil iyo dhaawac ka geystay gobolka Sh/Hoose
Maqaal XigaGuddiga Farsamada Hirshabeelle oo gaaray Jowhar + Sawiro